3 xeeladood oo CAJIIB ah oo ka dambeeya & 2 fashilaya tillaabada deg degta ah ee ay Madaxtooyadu qaadday!! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka 3 xeeladood oo CAJIIB ah oo ka dambeeya & 2 fashilaya tillaabada...
3 xeeladood oo CAJIIB ah oo ka dambeeya & 2 fashilaya tillaabada deg degta ah ee ay Madaxtooyadu qaadday!!
(Hadalsame) 07 Agoosto 2021 – War Saxaafadeed kasoo baxay Madaxtooyada Villa Somalia ayaa lagu sheegay in sida la yiri Madaxwaynaha oo ilaalinaya “waajibaadka dastuuriga ah ee ka saran ilaalinta Hantida Qaran iyo madaxbannaanida dalkeennu” uu soo saaray xeer hay’aadka dowladda u diidaya inay heshiis galaan inta lagu jiro marxaladda doorashada.
Waxaa kale oo lasoo qaadan karaa inaysan Villa Somalia arrintan ka daacad ahayn, waayo ma aysan sugin inta uu ka dhacayo kulanka la filayo, iyagoo markaa xaq u yeelan lahaa inay tillaabo qaadaan marka ay cadaato inuu RW Rooble heshiis galay iyo nooca uu yahay. Weliba waxay markaa heli lahaayeen taageerada shacabka oo buuxda.
3 – Waa qodob soo jireen ah oo ku qotoma in la abuuro daraama dadka lagu madadaaliyo, si looga jeediyo arrin xilligaa taagan waana sunno siyaasadeed oo aad loo bartay sanadihii dambe. Arrinta markan oo kale taagan waa tillaabadii maanta lagu sameeyey guddi doorasho oo aysan u dhamayn siyaasiyiinta metelaysa Somaliland, marka daraamahan yari wuxuu duwanayaa dareenka dadwaynaha oo iskaga badan kuwo la jihayn karo.
Previous articleMadaxtooyada oo soo saartay War Saxaafadeed ka dhan ah arrin uu wado RW Rooble
Next articleKenya oo malaayiin lacag ah ku heshay la tacaalidda dhibaato Somalia uga timid & agab la siiyey (Ma aha midda aad moodayso!)